तस्वीर र पर्यटकहरू द्वारा पेश गरिएको लेख | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
तस्वीर र लेख पर्यटकहरू द्वारा पेश गरिएको
तलका परियोजनाहरू पुरानो साइटबाट हो। यदि तपाईं हाम्रो परियोजनाको बारे हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ भने, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् आगन्तुक परियोजना टिप्पणी पृष्ठ तपाईं आफ्नो तस्वीर अपलोड र तपाईंको परियोजना बारेमा बताउन सक्छ।
केन Denman एक अद्भुत लेख "लेखेभण्डारण बाहिर एउटा जहाज को बाहिर ल्याउन"माइक्रोसफ्ट वर्ड ढाँचामा। धन्यवाद केन, मलाई यकीन छ कि अरुले यो उपयोगी पाउनेछन्।
यो मेरो समाप्त '56 Lightwin, मोडेल 3018 छ। तल्लो एकाइ मा नयाँ छाप सहित पूर्ण धुन अप गरे। ट्यांक निशाना एक नम्बर थियो र मूल रंग राम्रो नराम्रो आकार मा भएको हुँदा म तल यसलाई खोसिएर नाङ्गै र बस ट्यांक र cowlings चित्रित। म पनि बस हात ट्यांक ढाल र नियन्त्रण प्लेट चित्रित म त नयाँ Decals विरुद्ध निर्णय गरे। यो ठूलो चलिरहेको सानो किकर बास र bluegill लागि माछा पकडने, अपस्टेट दक्षिण कैरोलिना मा लेक Kewoee वरिपरि राम्रो क्लिप मा मेरो 8 'कश्ती धक्का।
मेरो '58 जॉनसन Seahorse 5.5hp आउटबोर्ड (संलग्न फोटोहरू) मेरो पितासँग भएको छ। म मिलवाकीलाई खेलकुदमा नयाँ खरीद गर्न उनीहरूको साथमा जाँदा स्पष्ट रूपमा सम्झन सक्दिन। म शायद मोटर भन्दा भन्दा ठूलो थियो। यो मेरो तहखाने / गेराज को आसपास लात लगाइएको छ र अन्तिम 25 + वर्षमा दौड गरिएको छैन। म संग भाग लिन सहन सक्दैन, तर अर्कोतिर यो सुराग गर्न सुरु गर्न कुनै सुराग छैन। मैले भर्खरै तपाईंको वेब साइटमा गर्भपतन विवरणमा आफ्नै परियोजना वर्णन गरेको ठोकर खाएको छु। म तपाईंलाई बताउन सुरू गर्न सक्दिन यो मेरो लागि कसरी उपयोगी छ। बस उन प्रयास र प्रयास को लागि धन्यवाद कि उन जानकारी को एक साथ राखन को लागि बस गर्न चाहता थियो। म यो सर्दमा मेरो जीवनलाई फिर्ता ल्याउन चाहन्छु।
जिम ROSENKRANZ (अटलान्टा)
नमस्ते टम। साइट प्रेम। मद्दत को लागि धन्यवाद। यहाँ मेरो 1964 जनसन 3HP केही तस्वीरहरु छन्। मेरी हजुरआमा मलाई यो मोटर र एउटा पुरानो फाइबर सिसा डुङ्गा (मेरो हजुरबुवा आबद्ध गर्न प्रयोग) दिनुभयो।
मोटर राम्रो आकारमा छ। यो overhauled र एक जोडी वर्ष पहिले अप ट्यून गरिएको थियो। मेरो मित्र माइक र म यो सबै भन्दा जाँच गरियो। यो मात्र2वास्तविक समस्या। दुई मूल coils दुवै तला थिए। साथै, प्ररित गर्नेवाला आवास गर्न स्क्रू हावा चूसना र मोटर गरम करना गर्न प्ररित गर्नेवाला कारण, सबै बाटो बस्ने छैन। ती अब यसको ठूलो निश्चित !! म यसलाई आफ्नो साइट थियो भने जहाँ सुरु गर्न ज्ञात थियो।
धन्यवाद, हारून Publicover
म मोटरको2तस्बिरहरू संलग्न गर्दैछु, मैले तपाईंको वेब पृष्ठ पछ्याए पछि ..... पुरानो गेहेनो
को जनसन मुख्यतया .... नयाँ जस्तै चल्छ हामी सिर्फ बास र speckled pearch लागि ट्रोल.
म आफ्नो लेख गरेको प्रयोग मेरो मोटर overhauling र तपाईंले यसलाई सफल थियो भनेर थाहा चाहन्थे सकियो। स्थानीय marina मोटर प्रयास र लागत मूल्य थिएन र यो चलिरहेको प्राप्त गर्न $ 500 भन्दा मलाई उद्धृत बताए। म किरा, अंक, कंडेनसर, coils, प्लग र चिकनाई पुनर्निर्माण carb, को प्ररित गर्नेवाला संग बारे मा 120 $ छ विश्वास गर्छन्। र यी स्टक वस्तुहरू थिए। म ताल यसलाई प्राप्त र यो के गर्न सक्छ हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। यो पनि पहिलो खींच मा सुरु! यो मोटर मेरो पत्नीको हजुरबुबा गर्न belonged र बारेमा 40 वर्ष मा चल्दैन छ, उनको मामा यसलाई आफ्नो छिंडीमा भण्डार थियो, यो वास्तवमा इन्धन थियो वा एउटा समयमा इन्धन के थियो, ट्यांक मा। वेबसाइट को लागि धन्यवाद, यो साँच्चै मलाई बाहिर धेरै मदत, र यो धेरै सजिलो पूरा गर्न गरे।